युरोपमा मौसम परिवर्तनको लागि अनुकूलनका कस्ता उपायहरू अपनाइदैछन्? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
युरोपमा जलवायु परिवर्तनको लागि के अनुकूलनका उपायहरू अपनाइदैछन्?
छवि - EEA
ध्रुव पग्लिन, विश्वभरी तापक्रम बढेको र बाढीको आवृत्तिमा भएको क्रमिक वृद्धिको परिणामस्वरूप समुद्री सतहमा भएको वृद्धिले युरोपले मौसम परिवर्तनलाई गम्भीर रूपमा लिन थालेको छ।
समुद्री तटलाई जोगाउन र प्रकोप हुनबाट जोगाउन अनुकूलन उपायहरूको एक श्रृंखला लिइएको छ। तर ती नापहरू के हुन्?
मौसम परिवर्तनलाई G20 बाट डोनाल्ड ट्रम्पलाई हटाइएको छ भन्ने बावजुद, पुरानो महाद्वीपमा एघार यूरोपियन नगरपालिकाहरू छन् जुन युरोपियन वातावरण एजेन्सीले अनुकूलनको राम्रो उदाहरणको रूपमा पहिचान गरेको छ यस समस्याको लागि कि ढिलो होस् वा चाँडो हामी सबैलाई असर गर्ने छ, र ती हुन्: बिलबाओ (स्पेन), लिस्बन (पोर्तुगल), कोपेनहेगन (डेनमार्क), ह्याम्बर्ग (जर्मनी), गेन्ट (बेल्जियम), माल्मो (स्विडेन), ब्राटिस्लावा (स्लोभाकिया) ), स्मोल्यायन (बुल्गारिया), पेरिस (फ्रान्स), एम्स्टर्डम (हल्याण्ड) र बोलोग्ना (इटाली)।
अपनाउनु पर्ने उपायहरू मध्ये: बाढीको संरक्षण गर्ने संरचनाहरूको निर्माण, त्यो पानी ट्याks्की स्थापना र शहरहरूको प्राकृतिकरण कौसीमा बोटबिरुवा राख्ने, सामुदायिक बगैंचा र / वा रूखहरू रोप्न।
छवि - बिलबाओ अन्तर्राष्ट्रिय
बिलबाओको विशिष्ट अवस्थामा, जोरोरोत्जाहरे भनिने नयाँ बाढी प्रुफ छिमेकी निर्माण भइरहेको छ। जिल्ला एक पुल द्वारा मुख्य भूमि संग जोडिएको एक कृत्रिम प्रायद्वीप मा हुनेछ। नागरिकहरूले धेरै सुरक्षित महसुस गर्न सक्दछन्, किनकि उनीहरूलाई बाढीबाट बचाउन एक ठूलो अवरोध स्थापना गरिनेछ। तर उपायहरू जोरोटजाउरेमा अन्त्य हुँदैन, तर पनि भवनहरूको भूमि स्तर उठाइनेछ र नयाँ हरियो ठाउँहरू सिर्जना गरिनेछ.
अर्कोतर्फ, कोपेनहेगनमा नयाँ मेट्रोको प्रवेश द्वार र सुविधाहरूमा फ्लोरहरू उठाउने योजना बनाइएको छ, र पनि, जहाँ सम्भव छ, पुरानो मा।
यसैले, मौसम परिवर्तनको नतिजा यति विघ्नकारी नहुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » युरोपमा जलवायु परिवर्तनको लागि के अनुकूलनका उपायहरू अपनाइदैछन्?
एम्स्टर्डम जलवायु परिवर्तनको बारेमा गम्भीर छ
तुफान क्याट्रिना, हाम्रो हालको ईतिहासको सब भन्दा विनाशकारी हो